लोहमन-रुचीले कस्तो प्रभाव पार्छ? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki Lohmann-Ruchti प्रभाव
अक्टोबर 16, 2017
लोहमन-रुची प्रभावको परिभाषा
der Lohmann-Ruchti प्रभाव एक बोलाइएको क्षमता विस्तार विस्तार हो। यो अर्थ, उदाहरणका लागि, निश्चित उत्पादन मशीनहरूमा विस्तार। त्यसोभए मूल्यह्रासबाट प्राप्त वित्तीय स्रोतहरूबाट पुन: खरीद गरिएको र पुन: प्राप्त हुन्छ। यसैले लोहमन-रूची प्रभाव मूल्यह्रास को एक प्रभाव हो। यो एक निश्चित सूत्र, तथाकथित क्षमता विस्तार कारक संग निर्धारण गर्न सकिन्छ। को Lohmann-Ruchti प्रभाव संग फरक मूल्य ह्रास कारण छ जो जारी राजधानी, प्रयोग गरिएको छैन भने, यो एक राजधानी जारी भनिन्छ भन्ने तथ्यलाई मा निहित।
परिचालन क्षमताको विस्तार
क्षमता खपत सम्बन्धित मूल्यह्रासबाट पूंजीको जारी गरी विस्तार गर्न सकिन्छ। यो तथ्य यो हो कि कम्पनीहरु मा निर्मित उत्पादनहरु को बिक्री मूल्य मा पौधों को उपयोग को लागि मूल्यह्रास शामिल छ। अधिकांश मामलाहरुमा, मूल्य को लागी क्षतिपूर्तिको लागी कम्पनीले पहिरन र मेशिनको आँसुको कारण एक नयाँ किन्न चाहने भन्दा बढी क्षतिपूर्ति गर्दछ। यस कारणको लागि, कम्पनीले पहिले नै पुन: विनिवेशको लागि पूंजी जारी गरेको छ।
यो उदाहरण प्रयोग गरी थप विस्तारमा वर्णन गर्न सकिन्छ। एक कम्पनी मा EUR212.000 को मूल्य मा ठूलो Teigrührgeräte निवेश। कम्पनी प्रत्येक3EUR / प्रतिवर्ष संग linearly वर्ष 4.000 गर्न आंदोलनकारियों लेख्छन्। यस लेख्ने-तल बाट लाभ) (x2उपकरणहरू)2EUR मूल्यह्रास) = refinanced (x 4000 EUR पहिलो र दोस्रो वर्षमा reinvesting द्वारा ((16.000 वर्ष। यो गणना दोस्रो वर्षको लागि, एक मिक्सर किनेको गर्न सकिन्छ भनेर देखाउँछ । लामो मा mixers तीन संख्या विस्तार गर्न सकिन्छ। यहाँ बरु चौथो वर्ष पछि भन्दा स्थिरीकरण छ।
क्षमता विस्तार र यसको चुनौतीहरू
लोहमन-रूची प्रभावले मात्र धेरै विशिष्ट परिस्थितिहरूमा उत्पन्न हुन सक्छ, किनभने यो सैद्धान्तिक प्रभाव हो। यदि कम्पनीले आफ्नो परिचालन क्षमता विस्तार गर्न प्रयास गर्दछ भने, निम्न पूंजीकरण अनिवार्य छन्।
1। प्रारम्भिक उपकरणको पूर्ण वित्त हुनुपर्छ।
2। मूल्यह्रासको अवधि प्रयोगको अनुरूप हुनुपर्छ।
3। दावीहरू मेट्न अनि तरल उद्देश्यका लागि उपलब्ध हुनुपर्छ।
4। उपकरण र प्रणालीहरूको प्रतिस्थापन मानहरू स्थिर रहनु पर्छ।
5। वर्षको अन्त्यमा पुनर्निवेश हुनेछ।
6। बजारमा मांग उच्च हुनु पर्छ, त्यसैले नयाँ मिसिन र प्रणालीहरू पनि राम्रो प्रयोगमा राख्न सकिन्छ।
7। आविष्कार वा हालको सम्पत्तिहरूको वित्तपोषण पर्याप्त रूपमा हल्लाएको छ।
8। ब्याज प्रभावहरूको ध्यान दिँदैन।
क्षमता विस्तार कसरी प्रभाव पार्ने हो?
यदि सबै आवश्यकताहरु पूरा भएमा, क्षमता विस्तार प्रभाव एक निश्चित सूत्र संग गणना गर्न सकिन्छ। यो सूत्रले साढे वर्षको उपयोगी जीवनमा निर्भर गर्दछ र: क्षमता विस्तार प्रभाव (केएफ) = एक्सएनमक्स * एन / (एन + एक्सएनएमएक्स)।
यहाँ एउटा निर्दिष्ट उदाहरण हो जुन सूत्रलाई वर्णन गर्दछ। उपयोगी जीवन4वर्ष हो। यदि तपाइँ सूत्रमा उपयोग शब्द प्रविष्ट गर्नुहुन्छ भने, निम्न परिणाम प्राप्त हुन्छ। KF =24 * / (4 1 +) = 1,6। यो, लामो समयसम्म 1,6 क्षमता क्षमता प्रारम्भिक अवस्थामा तुलनामा हासिल गर्न सकिन्छ। यसैले यो लामो समयमा2प्रणालीहरूमा3प्रणालीहरूमा विस्तार गर्न सकिन्छ।
लोहमन-रुची प्रभावको निष्कर्ष र सारांश
लोहमन-रूची प्रभावले कम्पनीको क्षमताको विस्तारलाई अन्ततः ग्यारेन्टी गर्न सक्छ। पुनरावृत्ति र उत्परिवर्तनकरण पुन: विनिवेशको रूपमा प्रयोग गरिन्छ र यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। यद्यपि, लोहेमन-रूची प्रभाव लागू गर्न आवश्यक पूरै भेट्न सकिन्छ। अन्यथा, क्षमता विस्तार हासिल गर्न सकिँदैन। यद्यपि, लोहमन-रुची प्रभाव को खरीद र पुन: भत्ता गर्न एक राम्रो तरिका हो।
अघिल्लो लेखउधारो शुल्क
अर्को लेखlombard ऋण